Ikhaya Iziganeko ezoyikisayoUlwaphulo-mthetho lwenene Igama lakhe lalinguTed Bundy
Igama lakhe lalinguTed Bundy
by UPiper uSt January 31, 2020
ibhalwe ngu UPiper uSt January 31, 2020
Namhlanje iAmazon ikhuphe ii-docuseries zabo uTed Bundy: Ukuwa kombulali. Ngelixa iBundy ibinokuphinda ibonakale eluntwini kule minyaka imbalwa idlulileyo, olu ngcelele lukhethe ukugxila kwilensi entsha. Ngoku abafazi abachaphazeleka ngumbulali obulalayo bayathetha.
Kuthathe uninzi lwabafazi iminyaka, kwanamashumi eminyaka ukuza ngaphambili ngamava abo. Batsho ukuba amabali abo akahoywa ngenxa yebali "leqhawe" lebali; Badiniwe nguTed Bundy ozukiswayo.
Abekho baninzi amaxhoba kaBundy abasindileyo, kodwa xa bengekho iintsapho zabo kunye nabahlobo bayabathethela, uninzi lwabo okokuqala. Iidocuseries zisikhanyisela kwaba bafazi ngeendlela amaxwebhu adlulileyo, amanqaku kunye neencwadi ezingenayo. Ayingawo amagama okanye imifanekiso. Ziintombi, oodade, abahlobo, ofunda nabo. Aba bafazi ekugqibeleni banikwa ilizwi kwisithuba seminyaka engamashumi amane.
Iidocuseries zikhumbula ukuba ii-1970s zokuqala zazingumgubo wenkululeko yesini kunye notshintsho olwaguqukayo kubafazi. Abasetyhini bafuna ukulingana kwamathuba kunye nokulawula imizimba yabo, isini kunye nokuzala. Babengasafuni kuhlala nengcinga yokubonwa njengezinto zesondo; kwaye le nto yenza amadoda amaninzi aphambane.
Ayibonwanga le kuphela kwiikholeji ezineeklabhu ezisandula ukusekwa, iiklasi kwizifundo zabasetyhini, nakwiindibano, kodwa nakumajelo eendaba. Umabonwakude ubonakalisa njengoMary Tyler Moore kwaye la Ntombazana ibonakalise abafazi abazimeleyo abaphila ubomi obuzimeleyo.
Abafazi ababini abalawula le ngxelo kwinxalenye yokuqala ngu-Elizabeth "Liz" Kendall kunye nentombi yakhe uMolly. Umama kunye nentombi yakhe babechithe iminyaka bebaleka isekisi elandela uTed Bundy, kodwa akusekho ukuthula kwabo.
Umama uLiz Kendall kunye nentombi yakhe uMolly Kendall
U-Liz ukhumbula ukuqala kwakhe ukudibana nalo mfana uthandekayo kwiklabhu yasebusuku apho wamcela ukuba adanise. Emva kwencoko ucele ukukhwela ekhaya evela kwindoda engaziwayo eyathi igama lakhe nguTed. Wamcela ukuba achithe ubusuku, kodwa hayi ngokwesondo. Aba babini bachitha ubusuku belele ebhedini yakhe, enxibile, ngaphezulu kwamashiti.
Ngentsasa elandelayo uKendall wamangaliswa kukuvuka kwaye wafumanisa ukuba uBundy uvukile kwangoko, wavusa intombi yakhe ebhedini kwigumbi lokuhlala, kwaye wayesekhitshini esenza isidlo sakusasa. Lo ngowona mfanekiso ucace gca kwisilo esikhulu esayanyaniswa negama. Ukususela ngaloo mini uBundy wayezinze kwiintsapho zabo ezimbini.
IiKendall kunye neTed
Ngenxalenye enye yeedocuseries ezi zimbini zichaza intlanganiso yazo yokuqala neBundy. Bavavanya ukubonakala kwabo okokuqala, amava, kunye neminyaka yabo yokuqala yokuqala bekunye. U-Liz wafudukela eSeattle ngethemba lokusebenzela iYunivesithi yase Washington. Wayefuna ukuqala ubomi obutsha kunye nentombi eneminyaka emi-3 ubudala enenjongo yokuhlangana noMnu. Wayengazi ukuba ngubani adibana naye angayi kuba yiyo ngaphandle kwaloo nto.
Ngexesha leminyaka yokuqala uLiz noMolly babalisa indlela isoka elinamehlo aluhlaza kunye notata onomdla wokuzibandakanya wazifaka kwiintsapho zabo. UBundy wayedlala noMolly kunye nabantwana baselumelwaneni. Intsapho ye-impromptu yabathathu yayiza kumema umntakwabo Bundy oneminyaka eli-12 ubudala ukuphuma kwakhe.
IBundy kunye neeKendalls
Isiqendu sokuqala sibhala oku ngemifanekiso emininzi yezinto ezibonisa amaxesha okonwaba, iinkumbulo ezimibalabala, kunye nobuso obuncumileyo obulibaleyo ukuba ubukele umboniso malunga nombulali obulalayo. Kukuqonda kobomi bukaBundy obothusayo obuchazwe egazini nakwimbubhiso engaziwayo.
Amaza aqala ukutshintsha
UKendall wayethanda u-Bundy omncinci kwaye waziva ukuba ulwalamano olunothando kakhulu. Nangona kunjalo, njengoko iminyaka iqhubeka iiflegi ezibomvu ngokuthe ngcembe zaqala ukubonakala. Malunga neminyaka emibini enesiqingatha kubudlelwane, phantse unyaka onesiqingatha ngaphambi kokubulawa kokuqala, enye yeeflegi zokuqala yenyuka. UBundy wayeza kuqhayisa kuLiz ngokuba.
Kuyinyani eyaziwayo iBundy yayiyi-kleptomaniac. Uninzi lwezinto ezizezakhe uBundy azifumene ebomini bakhe bonke zabiwa, kwaye wayonwabile ukumxelela ngezi zinto azenzileyo. Asikokuzingca nje kuphela, kodwa ngokuqhayisa.
Ngelo xesha uBundy wayesebenzela iqela leRiphabhlikhi. Omnye wemisebenzi yakhe yayikukusika umdlali ochaseneyo ngeendlela ezahlukileyo aze aqokelele ulwazi. Uya kuqhayisa ngokungaziwa kwaye akazange abonwe. Ngeli xesha ke uBundy waqonda ixabiso kunye namandla okuba luhlaselo, awalusebenzisa kamva ngexesha lobomi bakhe bokubulala.
Ngokwe-akhawunti ezininzi, ngoJanuwari 4, 1974 uBundy wenza ukubulala kwakhe okokuqala kwiSithili seYunivesithi. UKaren Epley akazange adibane noBundy ngaphambi kokuba angene egumbini lakhe aze amhlasele. Ukulimala kwakhe ngemizobo kukhokelele kwisinyi esikrazukileyo, ukonakala kwengqondo, kunye nokuva nokubona.
Owasindayo uKaren Epley
Ngelixa ebalisa ngamava akhe, u-Epley ucacisa eli lixesha lokuqala awakhe wathetha ngalo msitho. Wayefuna ukuba nemfihlo kwaye aqhubeke ebomini. Nangona kunjalo, uvumile ukuba kukho umoya wokugcina iimfihlo zabenzi bobubi kunye nolwaphulo-mthetho lwabo. Kwale ndlela inye "yokukhusela umenzi wobubi" isekhona nanamhlanje, yiyo loo nto uninzi lwamaxhoba oxhatshazo ngokwesondo engazukuya phambili ukuya kuxela ubugebenga.
Kwiiveki ezingama-4 kamva
Kwinyanga nje kamva ngoJanuwari 31, uBundy wabetha kwakhona. Olu lwaphulo-mthetho lwalunokufana okuninzi kuhlaselo luka-Epley, kodwa ixhoba uLinda Healy akazange aphile. Iakhawunti kaHealy ixelelwa ngabantu ahlala nabo kunye nosapho abaqhuba ilizwi lakhe kunye nebali.
U-Healy wayehlala kwindlu yamantombazana xa igumbi lakhe laqhekezwa kwaye wabethwa wathathwa egumbini lakhe. Akuzange kucaciswe ukuba ubhubhile na okanye hayi xa esuswa kwindawo ahlala kuyo. Nangona kunjalo, kwachazwa ukuba uBundy wenza ibhedi yakhe ukuze agubungele igazi kumatrasi, wasusa ingubo yakhe yokulala enegazi ukuyigcina kwigunjana, wamnxibisa iimpahla ezicocekileyo ngaphambi kokuba amthathe ekhaya.
Ngeli xesha kwakubonakala kuKendall kukho iinguqu ezininzi ezenzeka kwiTed. Enye yezinto ezahlukileyo ezibonakalayo kukuba iBundy yayiza kutshabalala iintsuku ngeentsuku. Baye benza imilo engakumbi yomlomo, eyahlala izolile ngexesha lokuphazamiseka.
Intombi kaMolly nayo iyawakhumbula la maxesha. Uyakhumbula engayiboni iBundy ejikeleze okuninzi, kunye nemisebenzi enxulumene nosapho phakathi kwaba bathathu. ULiz wayithatha ngokwakhe le nto waqalisa ukusela. Wayengazi ukuba ubuntu bakhe buyatshintsha, ukungabikho komzimba ebomini bakhe, kunye nokutshintsha kwemozulu ngendlela engaqhelekanga kwakunento yokwenza naye. Oku kwakungokuqala kwexesha lokubulala likaBundy.
IbundyUkuwa kwesibulala-mntuKendallliz kendallmolly kendallumntu obulala kakhuluIzibulala ngokungemthethoUTed Bundy
Ngothando lwazo zonke izinto ezoyikisayo kunye nolwaphulo-mthetho lokwenyani, uPiper uya kuhlala ebhala ngayo. Yongeza ubuqaqawuli bokwenza, imfashini, kunye neendlela zokuphila ezizezinye kwaye unalo mbhali. Unokuwafumana amanqaku akhe kwiHorror.com malunga nexhala kunye necandelo elitsha loLwaphulo-mthetho eliyinyani akhethwe ukuba alikhokele ,.
'Mntundini Kombat: Impindezelo yoonomadudwane' iTreyila ifumana umlinganiso
'Indawo Ethe cwaka Icandelo 2' I-TV Spot Drops Phambi kweSuper Bowl
URobert Hansen: Unosilarha, uBheki
URonald Defeo Jr., 'I-Amityville Horror,' Usweleke ...
IClown kunye neCandyman: Udliwanondlebe neNyaniso ...
URichard Ramirez: i-Night Stalker kunye ne-Satanic Panic ...
Aba bafana babona ukuba kwenzeke ntoni kuMonolith Xa ...
Imvelaphi eyiNene eyiGruesomely yekota ethi "Ukuqinisa ...
Umfazi wase-UK Ufumana i-Strange "Witch Decoy Kit" e ...
USarah Paulson Izabelo ezothusayo kwiNkangeleko eNtsha eMelika ...
UBrittany Murphy: Ukufa okunempikiswano
I-Bailey Sarian: Ukubulala, iMfihlakalo, kunye neMakeup